အသစ်အသစ်တွေကို ခံစားကြည့်ရှုချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် Viu မှာ အသစ်ထပ်တင်ထားတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားများ – For her myanmar
Posted on June 21, 2019 June 21, 2019 Author Yin Sandi Ko	Comment(0)
မြန်မာကားကိုမှ ကြိုက်တာဆိုတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေအတွက် 😎
မိုးအေးအေးလေးနဲ့ အိမ်မှာရှယ်နှပ်ရင်း ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးတွေ ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် Viu ဆိုတဲ့ App လေး ရှိတာ သိပြီးပြီလား?
Viu app ကို ယောင်းတို့ သုံးနေကျ ဘယ်လို မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်းကနေမဆို အသုံးပြုလို့ ရတဲ့အပြင် လတိုင်းလည်း ဇာတ်ကားအသစ်အသစ်တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်စရာမရှိတော့မှာကို စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ဘူးလေ… Viu ရဲ့ မူပိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အပါအဝင် ဟာသဇာတ်မြူးဇာတ်ကားတွေကိုပါ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရသပေါင်းစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ ခံစားနိုင်မှာပါ… ဒီတော့ ယောင်းတို့အသစ်သစ်တွေ ထပ်မံခံစားနိုင်ဖို့ Viu မှာ အသစ်ထပ်တင်လိုက်တဲ့ အချစ် ၊ ဟာသ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ရင်ခွင်ရှင်းတမ်း ( ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ် )
ယောင်းတို့ရေ.. အခုလကစပြီး ရင်ခွင်ရှင်းတမ်းဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို Viu ကနေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်တော့မှာပါ.. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာတော့ ဟိန်းဝေယံနဲ့ မအေးသောင်း (အေးဝတ်ရည်သောင်း) တို့က အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ အဆင့်အတန်းမတူညီကြသူတွေကြားထဲက အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နဲ့ ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းတွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
မအေးသောင်းနဲ့ ဟိန်းဝေယံအပြင် လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ ငြိမ်းသော် ၊ သွန်းဆက်နဲ့ တခြားမျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်တွေပါ ပါဝင်အားဖြည့်ပြီး အချစ်ဇာတ်ရှုပ်ကို ရှင်းကြမှာဆိုတော့ ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားကြမှာ သေချာပါတယ်နော်…
ဇာတ်လမ်းတွဲမဟုတ်ဘူး.. ရုပ်ရှင်ကားပဲ စိတ်ဝင်စားတာဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် Viu က ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကတော့…
ယောင်းတို့ရေ.. စိတ်ခံစားမှုရသမျိုးစုံကို ရုပ်ရှင်တစ်ကားထဲကနေ ရရှိချင်ရင်တော့ တာတေကြီးရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်.. ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ နေတိုးက သရဲဝင်ပူးခံရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော သရဲမအနေနဲ့ပါ ကာရိုက်တာနှစ်ခုကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ထားတာမို့ ဟာသရသနဲ့ ကရုဏာရသနှစ်ရပ်လုံးက်ို ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ… ဒီရုပ်ရှင်ကားကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ ရုံတင်ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်…
၂။ လရောင်ဖြာတဲ့ အင်းလေးမှာ
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ မြင်တွေ့ဖူးနေကျ တခြားဇာတ်ကားတွေနဲ့ မတူဘဲ အချစ်နဲ့သည်းထိတ်ရင်ဖို ရသတွေကို ရောနှောတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.. လပြည့်ညရောက်တိုင်း မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပါ.. နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရင်နင့်ဖွယ်ရာ ၊ လွမ်းမောဖွယ်ရာ ရသတွေအပြင် အင်းလေးဒေသရဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေကိုပါ ပီပီပြင်ပြင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်…
Related Article >>> မျက်ရည်မခိုင်သူတွေ လုံးဝမကြည့်သင့်တဲ့ More Than Blue ဇာတ်ကား
၃။ ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင်
ချမ်းသာပြီးမောက်မာတဲ့ ထားသခင်(ဖွေးဖွေး)နဲ့ ထားသခင်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တာကို အမြဲခံနေရတဲ့ ခွန်းသ(နေတိုး)တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါ…
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားနာမည် ကျွန်မကနှင်းဆီပါမောင် ဆိုတဲ့စကားကလည်း လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါသေးတယ်.. ပရိသတ်တွေ အရမ်းကြိုက်ပြီးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ ယောင်းတို့အကြိုက်တွေ့မှာပါ…
၄။ စေတန်ရဲ့ ကချေသည်
ယောင်းတို့ရေ.. ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဆုရဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး စိတ်မကျေချမ်းမှုတွေ ၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေ ၊ ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှုတွေကြားက မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းအချစ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်..
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ယောမင်း(နေတိုး)က ချမ်းသာပြီးဆိုးသွမ်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ၊ ကြွေရုပ်(သက်မွန်မြင့်) ကို သူ့အနားခေါ်ထားပြီး သူ့ဝေယျာဝစ္စတွေခိုင်းလို့ အမျိုးမျိုး စိတ်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ သူပါ။ သူတို့ကြားက ပဋိပက္ခတွေ၊ သံယောဇဉ်နဲ့ အမုန်းတရားတွေကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်…
၅။ ဂယ်ဘဲသရဲနှင့် သူငယ်ရွာ
ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ ထွန်းထွန်း ၊ ရဲလေး ၊ ရွှေသမီး ၊ ခင်လှိုင်နဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး မိန်းမလျာသရဲတစ်ယောက်က မိန်းကလေးကိုယ်ထဲဝင်ပူးပြီး ရွာထဲကကောင်လေးတွေကို အတင်းဝင်ရောတဲ့ပုံစံမျိုးကို ဟာသအနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်.. ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုစီတိုင်းက ယောင်းတို့ကို ရယ်မောစေနိုင်မှာပါ.. ဒါ့အပြင် မိန်းမလျာတွေကို မနှိမ့်ချဖို့နဲ့ LGBT တွေကို ခွဲခြားမဆက်ဆံကြဖို့ အသိပညာပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးလည်း ဖြစ်နေပါသေးသတဲ့ ယောင်းတို့ရေ…
ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Viu က ဇာတ်ကားသစ်တွေအကြောင်း သိလောက်ပါပြီနော်… Viu ကို App Store နဲ့ Google Play Store တို့မှာ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပြီး ဖုန်းတွေ၊ တက်ဘလက်တွေကနေ ကြည့်ရှုနိုင်သလို www.viu.com မှာလည်း တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်…
မွနျမာကားကိုမှ ကွိုကျတာဆိုတဲ့ ယောငျးယောငျးတှအေတှကျ 😎
မိုးအေးအေးလေးနဲ့ အိမျမှာရှယျနှပျရငျး ဇာတျကားကောငျးကောငျးလေးတှေ ကွညျ့မယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ Viu ဆိုတဲ့ App လေး ရှိတာ သိပွီးပွီလား?
Viu app ကို ယောငျးတို့ သုံးနကြေ ဘယျလို မိုဘိုငျးလျပစ်စညျးကနမေဆို အသုံးပွုလို့ ရတဲ့အပွငျ လတိုငျးလညျး ဇာတျကားအသဈအသဈတှကေို တငျဆကျပေးနတောမို့ ဇာတျကားတှေ ကွညျ့စရာမရှိတော့မှာကို စိုးရိမျစရာ မရှိတော့ဘူးလေ… Viu ရဲ့ မူပိုငျရုပျရှငျဇာတျကား ဇာတျလမျးတှဲတှေ အပါအဝငျ ဟာသဇာတျမွူးဇာတျကားတှကေိုပါ ကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ရသပေါငျးစုံကို တဈနရောတညျးမှာ ခံစားနိုငျမှာပါ… ဒီတော့ ယောငျးတို့အသဈသဈတှေ ထပျမံခံစားနိုငျဖို့ Viu မှာ အသဈထပျတငျလိုကျတဲ့ အခဈြ ၊ ဟာသ မွနျမာရုပျရှငျကားကောငျးလေးတှကေို မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
ရငျခှငျရှငျးတမျး ( ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲအသဈ )
ယောငျးတို့ရေ.. အခုလကစပွီး ရငျခှငျရှငျးတမျးဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲအသဈကို Viu ကနေ ကွညျ့ရှုခံစားနိုငျတော့မှာပါ.. ဒီဇာတျလမျးတှဲထဲမှာတော့ ဟိနျးဝယေံနဲ့ မအေးသောငျး (အေးဝတျရညျသောငျး) တို့က အဓိကသရုပျဆောငျတှအေနနေဲ့ ပါဝငျထားပါတယျ။
ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာတော့ အဆငျ့အတနျးမတူညီကွသူတှကွေားထဲက အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျနဲ့ ကံကွမ်မာ အလှညျ့အပွောငျးတှကေို တှမွေ့ငျရမှာပါ။
မအေးသောငျးနဲ့ ဟိနျးဝယေံအပွငျ လူငယျတှေ အကွိုကျတှကွေ့တဲ့ ငွိမျးသျော ၊ သှနျးဆကျနဲ့ တခွားမကျြနှာသဈ သရုပျဆောငျတှပေါ ပါဝငျအားဖွညျ့ပွီး အခဈြဇာတျရှုပျကို ရှငျးကွမှာဆိုတော့ ယောငျးတို့စိတျဝငျစားကွမှာ သခြောပါတယျနျော…
ဇာတျလမျးတှဲမဟုတျဘူး.. ရုပျရှငျကားပဲ စိတျဝငျစားတာဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ Viu က ထပျဖွညျ့ထားတဲ့ ရုပျရှငျကားလေးတှကေတော့…
ယောငျးတို့ရေ.. စိတျခံစားမှုရသမြိုးစုံကို ရုပျရှငျတဈကားထဲကနေ ရရှိခငျြရငျတော့ တာတကွေီးရုပျရှငျကို ကွညျ့ပါလို့ ညှနျးခငျြပါတယျ.. ဒီဇာတျကားထဲမှာ နတေိုးက သရဲဝငျပူးခံရတဲ့ လူငယျတဈယောကျအနနေဲ့ရော သရဲမအနနေဲ့ပါ ကာရိုကျတာနှဈခုကို အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျ ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျထားတာမို့ ဟာသရသနဲ့ ကရုဏာရသနှဈရပျလုံးကို ခံစားရရှိနိုငျမှာပါ… ဒီရုပျရှငျကားကတော့ ၂၀၁၇ ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားဖွဈပွီး ဝငျငှအေမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ ရုံတငျဇာတျကားလညျးဖွဈပါတယျ…
၂။ လရောငျဖွာတဲ့ အငျးလေးမှာ
ယောငျးတို့ရေ.. ဒီဇာတျကားလေးကတော့ မွငျတှဖေူ့းနကြေ တခွားဇာတျကားတှနေဲ့ မတူဘဲ အခဈြနဲ့သညျးထိတျရငျဖို ရသတှကေို ရောနှောတငျဆကျထားတာဖွဈပါတယျ.. လပွညျ့ညရောကျတိုငျး မကောငျးဆိုးဝါးတဈကောငျအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတတျတဲ့ လူတဈယောကျက သူ့ကိုယျသူထိနျးခြုပျနိုငျအောငျ ကွိုးစားရုနျးကနျနရေတဲ့ ဇာတျရုပျကို စိတျလှုပျရှားဖှယျ ပုံဖျောရိုကျကူးထားတာပါ.. နတေိုးနဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျတို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး ရငျနငျ့ဖှယျရာ ၊ လှမျးမောဖှယျရာ ရသတှအေပွငျ အငျးလေးဒသေရဲ့ သဘာဝအလှတရားတှကေိုပါ ပီပီပွငျပွငျ ရိုကျကူးတငျဆကျထားတာကို မွငျတှခေံ့စားရမှာဖွဈပါတယျ…
Related Article >>> မကျြရညျမခိုငျသူတှေ လုံးဝမကွညျ့သငျ့တဲ့ More Than Blue ဇာတျကား
၃။ ကြှနျမက နှငျးဆီပါမောငျ
ခမျြးသာပွီးမောကျမာတဲ့ ထားသခငျ(ဖှေးဖှေး)နဲ့ ထားသခငျရဲ့ အနိုငျကငျြ့နှိပျစကျတာကို အမွဲခံနရေတဲ့ ခှနျးသ(နတေိုး)တို့ရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးအကွောငျးကို ရိုကျကူးပုံဖျောထားပါ…
ဒီဇာတျကားကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့ပွီး ဇာတျကားနာမညျ ကြှနျမကနှငျးဆီပါမောငျ ဆိုတဲ့စကားကလညျး လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ပါသေးတယျ.. ပရိသတျတှေ အရမျးကွိုကျပွီးအားပေးခဲ့ကွတဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးမို့ ယောငျးတို့အကွိုကျတှမှေ့ာပါ…
၄။ စတေနျရဲ့ ကခသြေညျ
ယောငျးတို့ရေ.. ဒီဇာတျကားလေးကတော့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ဆုရဇာတျကားတဈကားဖွဈပွီး စိတျမကခြေမျြးမှုတှေ ၊ ဝမျးနညျးကွကှေဲမှုတှေ ၊ ခှငျ့လှတျသညျးခံမှုတှကွေားက မှေးဖှားလာတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအကွောငျး ဇာတျအိမျတညျထားတဲ့ ခပျကွမျးကွမျးအခဈြဇာတျကားဖွဈပါတယျ..
ဒီဇာတျကားထဲမှာ ယောမငျး(နတေိုး)က ခမျြးသာပွီးဆိုးသှမျးတဲ့ သူတဈယောကျ ၊ ကွှရေုပျ(သကျမှနျမွငျ့) ကို သူ့အနားချေါထားပွီး သူ့ဝယြောဝစ်စတှခေိုငျးလို့ အမြိုးမြိုး စိတျဒုက်ခပေးတတျတဲ့ သူပါ။ သူတို့ကွားက ပဋိပက်ခတှေ၊ သံယောဇဉျနဲ့ အမုနျးတရားတှကေိုတော့ ဒီဇာတျကားလေးမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ…
၅။ ဂယျဘဲသရဲနှငျ့ သူငယျရှာ
ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာတော့ ထှနျးထှနျး ၊ ရဲလေး ၊ ရှသေမီး ၊ ခငျလှိုငျနဲ့ ဟာသသရုပျဆောငျတှေ အမြားကွီးပါဝငျအားဖွညျ့ထားပွီး မိနျးမလြာသရဲတဈယောကျက မိနျးကလေးကိုယျထဲဝငျပူးပွီး ရှာထဲကကောငျလေးတှကေို အတငျးဝငျရောတဲ့ပုံစံမြိုးကို ဟာသအနနေဲ့ ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ.. ပါဝငျတဲ့ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတဈခုစီတိုငျးက ယောငျးတို့ကို ရယျမောစနေိုငျမှာပါ.. ဒါ့အပွငျ မိနျးမလြာတှကေို မနှိမျ့ခဖြို့နဲ့ LGBT တှကေို ခှဲခွားမဆကျဆံကွဖို့ အသိပညာပေးထားတဲ့ ဇာတျလမျးကောငျးလေးလညျး ဖွဈနပေါသေးသတဲ့ ယောငျးတို့ရေ…
ကဲ… ဒီလောကျဆိုရငျတော့ Viu က ဇာတျကားသဈတှအေကွောငျး သိလောကျပါပွီနျော… Viu ကို App Store နဲ့ Google Play Store တို့မှာ အခမဲ့ဒေါငျးလုတျ ရယူနိုငျပွီး ဖုနျးတှေ၊ တကျဘလကျတှကေနေ ကွညျ့ရှုနိုငျသလို www.viu.com မှာလညျး တိုကျရိုကျဝငျရောကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ…
Tagged drama, Funny, LGBT, Movie, movie reviews, successful, viu
ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားရမယ့် IMDB မြင့် မှုခင်း/ထောက်လှမ်းရေး ဇာတ်လမ်းကောင်း (၃) ခု
Posted on April 3, 2019 April 3, 2019 Author Aye Mon Kyaw
စလယ်ဆုံး ဇာတ်ရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ ရင်ထိတ်စေမှာမို့ စိတ်ငြိမ်ဆေးလေးတော့ ဆောင်ထားစေချင်
Posted on January 9, 2019 January 9, 2019 Author Aye Mon Kyaw
၂၀၁၈ အတွက် IMDb ကရွေးချယ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား (၅) ကား
Posted on December 4, 2018 December 4, 2018 Author Hnin Ei Oo
နိုဝင်ဘာလအထိ သုံးသပ်ချက်အရတော့ ဒီရုပ်ရှင်တွေက IMDb အများဆုံးပါပဲ။